क्यालिफोर्नियामा एन्टा गठन
अमेरिका, २६ साउन । एसोसिएसन अफ नेप्लिज तराइएन इन अमेरिका (एन्टा)को छाता संगठन क्यालिफोर्नियामा पनि गठन भएको छ । डा. जयप्रकाश साहको अध्यक्षतामा ११ सदस्यीय क्यालिफोर्निया च्याप्टर गठन भएको हो । ‘‘पहिचान, एकता र सशक्तिकरण” मुल उद्देश्यका साथ अमेरिकामा रहेका नेपालका तराईमा बसोबास गर्ने मधेशी समुदायहरुको छाता संगठन क्यालिफोर्निया च्यापटर गठन भएको हो ।
नयाँ गठिन च्यापटरको नाम क्यालिफोर्निया एसोसिएसन अफ नेप्लीज तराईन ईन अमेरिका (सि—एन्टा) राखिएको जनाइएको छ । सो समितिमा उपाध्यक्ष राम सिंह, कोषाध्यक्ष श्यामली साह, सचिव धुव्र कुमार झा रहेका छन् भने सदस्यहरुमा सविता चौधरी, प्रदिप साह, रन्जना साह, प्रविण कुमार गुप्ता, विरेन्द्र मिश्रा, राजिव साह, संगिता देव रहेका छन् ।
त्यस्तै, क्यालिफोर्निया च्याप्टरका सल्लाहकार समितिमा डा. राम साह, डा. अर्चना कायस्थ, डा गंगा देव रहेको जनाइएको छ । फोटो : टुडेखबरबाट